Wefti Ka socda Baanka Horumarinta Afrika oo ka hadlay socdaal ku yimaadeen Somaliland | FooreNews
Home wararka Wefti Ka socda Baanka Horumarinta Afrika oo ka hadlay socdaal ku yimaadeen Somaliland
Wefti Ka socda Baanka Horumarinta Afrika oo ka hadlay socdaal ku yimaadeen Somaliland
fooreMar 18, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)- Wefti balaadhan oo ka kooban Baanka Horumarinta Afrika ayaa maanta socdaal shaqo ku yimid caasimadda Somaliland ee Hargaysa.
Weftigan oo uu hogaaminayo Dr. Cabdiraxmaan Beyle oo ka tirsan masuuliyiinta baankaasi ayaa waxaa Garoonka caalamiga ah ee Cigaal International Airport ku soo dhoweeyey masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda Somaliland oo ay ka mid yahiin wasiirrada wasaaradaha Macdanta iyo Biyaha iyo Beeraha.
Wasiirka wasaaradda macdanta iyo Biyaha Xuseen Cabdi Ducaale oo warbaahinta kula hadlay Qolka nasashada ee Madaarka ayaa sheegay inay tahay markii ugu horaysay ee wefti lixaad leh oo ka socda baanka Horumarinta Afrika ay socdaal ku yimaadaan Dalka.
Wasiirka oo ka hadlayay weftigan wuxuu yidhi “Weftigaasi markaa waxa uu ka kooban yahay madax badan oo bangiga ka socota oo waa markii ugu horreysay oo wefti laxaadka le’eeg ama ha yaraado ama ha badnaadee oo cagaha u soo laad-laaydiyo jamhuuriyadda Somaliland.”
Xuseen Cabdi Ducaale waxa uu sheegay in inta uu weftigu joogo lala lafa-gurayaan sidii ay u wadda shaqayn lahayeen bangiga horumarinta Africa iyo Somaliland.
“Weftigaas oo muddo dheer in lala joogayaa oo in lala lafa-gurayaa sida aynu u wadda shaqayn lahayn bangiga oo muddo dheer-dheer ka maqnaa geeska afrika oo sidii uu burburku ugu dhacay dawladdii hore ee la odhan jiray Soomaaliya oo ay imikaba ugu horreysa inay dibaddaba yimaadaan oo waxay u socdaan waxa weeye inay maalinta maanta sidii ay mucaalimaad ama xidhiidhkii hore ee jiri jiray ay u soo celin lahayeen oo ay inoo la shaqayn lahayeen dawladda ahaan,”ayuu yidhi Wasiirku.
Wasiirku wuxuu intaasi ku daray in Baankaasi uu hormuudka yahay barnaamijyada dhinaca horumarinta ee qaaradda Afrika.
Dr. Cabdi-raxmaan Beyle ayaa sheegay in ujeedada socdaalka weftigu tahay sidii madaxda Somaliland ay uga wada hadli lahaayeen shaqooyinka baanku ka hayo dalalka qaaradda iyo weliba dhinacyada uu baanku ka taageeri karo Somaliland gaar ahaan dhinacyada Biyaha, Beeraha, ka hor tagga abaaraha iyo adeegyadda kale ee arrimaha bulshada.
“Halkanwaxa socda wefti laxaad leh oo ka socdaa bangiga horumarinta Africa, waxaanan hadalkan u nimi waxa weeye in aanu isla lafa-gurno mashruuca Somaliland ee uu banku u qaban lahaa oo shaqo dheer ayaa noo socotay oo waanu isa-soo wadda raacnay oo dad badan oo meelo badan oo banka ka mid ah ayaa socda oo ahaato anaga ama beeraha oo waxaanu doonayna muddada aanu halkan joogno in aanu sheeko dheer qaadano oo aanu isla eegno waxaanu qaban karayno,”ayuu yidhi Dr. C/Raxmaan Bayle.
Waxa isna halka ka hadlay wasiirka wasaaradda Beeraha Somaliland Prof Faarax Cilmi Geedoole, waxaanu weftigan ku tilmaamay inay Somaliland u tahay fursad weyn, isla markaana ay ka caawin doonaan meelo badan oo ay ka mid tahay beeruhu.
Weftigan ka socda baanka horumarinta ee Afrika oo booqashadoodu ay ka dambaysay xidhiidh ay xukuumadda Somaliland hore ula samaysay ayaa waxa ay dalka ku sugnaan doonaan in Muddo ah.
Previous PostG/Wakiiladda Oo Cod Aqlabiyad ah ku ansixiyay laba istiqaaladood oo la horgeeyay Next PostCabdicasiis Samaale oo markii ugu horreysay ka hadlay Xilka Cusub ee loo magacaabay, Masuuliyaddii uu hore umadda ugu hayey iyo Shakhsiyadda Wasiirka uu xilka kala wareegayo